तपाईं छुट्टिमा हुँदा, तपाईंले जापानी सरकारबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ। | COVID-19 多言語情報ポータル
तपाईंले अस्थायी व्यापार पाठ्यक्रमको अवधिमा आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नुहुन्न भने, तपाईं जापानी सरकारबाट वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ।
COVID-19 महामारीको कारणले अस्थायी रूपमा कार्यस्थल बन्द भएपनि आर्थिक सहायता प्राप्त नगरेको केही व्यक्ति हुनुहुन्छ? तपाईंको रोजगारदाता (उदाहरण: COVID-19 द्वारा निम्तिएको मन्दीको कारणले) सक्षम नभएको हुनाले तपाईंले उहाँबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं ”COVID-19 प्रकोप (休業支援金; कुग्यो सिनकिन) मा छुट्टि लिनको लागि जोर दिन सहायता कोष तथा भत्ता”, जापानी सरकारबाट दिइने आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ। यो एउटा लाभ हो। तपाईंले पछि यसको भुक्तानी गर्नुपर्दैन।
*यो अनुच्छेदमा, हामीले सामान्यतया सहजताका लागि ”लाभ”/”समर्थन कोष तथा भत्ता” लाई समर्थन कोष भन्दछौं।
जुलाई 10 बाट, लाभका लागि आवेदन सुरु गरिएको छ। जुलाई 10 अनुसार हुलाक पत्राचारद्वारा गरिने आवेदन एउटा मात्र विकल्प हुन्छ। अनलाइन आवेदन प्रणाली छिट्टै उपलब्ध हुनेछ। *यद्यपि, यो अझै सञ्चालन भएको छैन। यो सुरु भयो भने, हामीले यो अनुच्छेद अपलोड गर्नेछौं।
तपाईंले पहिलो आवेदनको लागि छनोट गर्नुभएको जस्तै समान तरीकाले प्रत्येक आवेदन लाभको लागि बनाइएको हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि, यदि तपाईंले हुलाक पत्राचारद्वारा लाभको लागि पहिलो आवेदन दिनुहुन्छ भने, तपाईंले अर्को पटकबाट पनि हुलाक पत्राचारद्वारा आवेदन दिनुपर्छ।
को-को योग्य छन्?
तपाईंले तलका दुबै अवस्थाहरू पूरा गर्नुपर्छ।
तपाईंले *सानो वा मध्यम-आकारको कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ
तपाईंले आफ्नो कम्पनीबाट कुनै आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नुभएको छैन।
अन्य विस्तृत अवस्थाहरू पूरा गर्नुपर्ने भए तापनि, माथि उल्लिखित दुई अवस्थाहरू पूरा गर्ने व्यक्तिहरू सामान्यतया योग्य छन्।
साथै, यो लाभले रोजगार बीमा नगरेका व्यक्तिहरू(विद्यार्थी सहित) को आंशिक-समयलाई समेट्ने भएकाले, यो अस्थायी व्यापार बन्दको अवधिमा आर्थिक सहायताका सम्बन्धमा विद्यमान प्रणालीहरूभन्दा भिन्न छ।
साना वा मध्यम-आकारका कम्पनीहरू” कुन-कुन हुन्?
थोक व्यापार उद्योग: /100 मिलियन येन वा सोभन्दा कम पूँजी कोष/100 जना वा सोभन्दा कम कर्मचारीहरू भएका कम्पनीहरू
सेवा उद्योग: 50 मिलियन येन वा सोभन्दा कम पूँजी भएको/100 जना वा सोभन्दा कम कर्मचारीहरू भएका कम्पनीहरू
खुद्रा उद्योग (खाद्य सेवा उद्योग): 50 मिलियन येन वा सोभन्दा कम पूँजी भएको/50 जना वा सोभन्दा कम कर्मचारीहरू भएका कम्पनीहरू
अन्य उद्योगहरू: 300 मिलियन येन वा सोभन्दा कम पूँजी भएको/300 जना वा सोभन्दा कम मानिसहरू भएका कम्पनीहरू
निम्न भएमा तपाईंले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंले COVID-19 महामारीको कारणले निश्चित समयावधिको लागि छुट्टि लिनुभएको छ भने; यो【अप्रिल 1 र सेप्टेम्बर 30, 2020】को बीचमा हुनुपर्छ
तपाईंले उक्त समयमा आफ्नो रोजगारदाताबाट कुनै आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नुभएको छैन भने।
लाभको अवधि छुट्टिको अवधिबाट निम्न दिनको रकम कटौती गरेर गणना गरिएको मानिन्छ:
निर्धारित गरिए अनुसार तपाईंले काम गरेको दिनको रकम
तपाईंले व्यक्तिगत कारणले गर्दा बिदा लिएको दिनको रकम (उदाहरण: अभिभावकीय बिदा)
तपाईंले कत्तिको दाबी गर्नुहुन्छ
तपाईंले अस्थायी व्यापार बन्द हुनुअघि आफूले प्राप्त गर्ने रकमको 80% रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अधिकतम लाभ रकम भनेको 330,000 येन/महिना हो।
तपाईंले रोजगार बीमा गर्नुभएको छैन भने, तपाईंले त्यस अनुसार आफ्नो ज्यालाको 80% रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंलाई केही रोजगारदाताद्वारा नियुक्त गरिएको छ र उनीहरूले तपाईंलाई छुट्टि दिएका छन् भने, तपाईंले यो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो अवस्थामा, तपाईंले आवेदन फारामहरू पूरा गर्नुपर्छ जुन हामीले अर्को खण्डमा वर्णन गरेको भन्दा भिन्न छ।
यो अनुच्छेदमा, तपाईं आफैले हुलाक पत्राचारद्वारा लाभको लागि कसरी आवेदन दिनुहुन्छ भन्ने बारे हामी परिचय गर्छौं।
वेबसाइटबाट ”लाभ सम्बन्धी दाबी फाराम’‘ र ”लाभ भुक्तानीका लागि आवश्यताहरूको पुष्टिकरण” डाउनलोड गर्नुहोस् र खाली ठाउँ भर्नुहोस्।
”तपाईंको आइडीको प्रतिलिपि”, तपाईंको बैङ्क खाता पुष्टि गर्ने कागजातको प्रतिलिपि” र अस्थायी रूपमा व्यापार बन्द हुने अवधिमा तपाईंको ज्यालाको रकमबारे उल्लेख गर्ने कागजातको प्रतिलिपि” तयार गर्नुहोस्।
माथि उल्लिखित सबै कागजातहरू खाममा राख्नुहोस् र त्यसलाई पोस्ट गर्नुहोस्।
प्रान्तका प्रत्येक श्रम कार्यालयहरूले तपाईंको आवेदन मूल्याङ्कन गर्छन् र तपाईंले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न भन्ने बारे निर्णय गर्छन्।
तपाईंले मूल्याङ्कनको नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले परीक्षण पास गर्नुभयो भने, लाभ तपाईंको बैङ्क खातामा जोडिनेछ।
आवेदन फारामहरू भर्ने
आवेदन दिनको लागि, तपाईंले “लाभ सम्बन्धी दाबी फाराम” र “लाभ भुक्तानीका लागि आवश्यताहरूको पुष्टिकरण”भर्नुपर्छ। तपाईंले स्वास्थ्य, ‍श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन गरिएको वेबसाइटबाट यी फारामहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
*तपाईंले यी फारामहरूलाई A4 साइजको पेपरमा प्रिन्ट गर्नुपर्छ। तपाईंको नजिक कुनै इन्टरनेट जडान छैन भने, तपाईं कागजातहरू प्राप्त गर्न रोजगार सेवा केन्द्र (Hello Work) मा जान सक्नुहुन्छ।
”लाभ सम्बन्धी दाबी फाराम”, तपाईंलाई आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी, तपाईंको रोजगारदाताको जानकारी, बिदाको अवधि र त्यस्तै अन्य कुराहरू भर्न आवश्यक पर्छ।
“लाभ भुक्तानीका लागि आवश्यताहरूको पुष्टिकरण” भनेको आवेदकहरूले भुक्तानीका आवश्यकताहरू पूरा गरे/नगरेको र तपाईंले आवेदन फाराम उचित तरिकाले पूरा गरे/नगरेको पुष्टि गर्ने कागजात हो।
* तपाईंको रोजगारदाताद्वारा यो कागजातका केही भागहरूमा भरिएको हुनुपर्छ।
अर्को खण्डबाट, हामी तपाईंले वास्तविक रूपमा के-कस्ता जानकारी भर्नुपर्छ भन्ने बारे उल्लेख गर्छौं।